Faritra Atsinanana sy Alaotra Mangoro : Resy lahatra amin’ny 25 -
AccueilRaharaham-pirenenaFaritra Atsinanana sy Alaotra Mangoro : Resy lahatra amin’ny 25
Faritra Atsinanana sy Alaotra Mangoro : Resy lahatra amin’ny 25
Nisafidy ny nihaona tamin’ny vahoakan’iny Faritra Atsinanana sy Alaotra Mangoro iny ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, tamin’ny andro faharoan’ny fampielezan-kevitra, omaly. Araka izany, tomefy hatrany ireo toerana sy tanàna nandalovany toa ny tao Ambatondrazaka, Amparafaravola sy Brickaville ary Toamasina.
Horakora-pifaliana hatrany no nitsenan’ny mponina tamin’ireo toerana nolalovan’ny kandidà Marc Ravalomanana ireo. Mbola tsy mandray fitenenana akory ny tenany dia efa miara-miredona ny hira fanevan’ny fampielezan-kevitr’ity kandidà laharana faha-25 ity ny vahoaka. Midika sahady izany fa efa ela no niandrasan’izy ireo ny fihaonana amin’i Dada sy ny kandidà hametrahany ny fitokisany sy ny safidiny.
Nambaran’ny kandidà Marc Ravalomanana tamin’ireo mpomba azy tamin’ireo tanàna nosafidiany notsidihina omaly ireo, fa vonona ny tenany hitondra fanovana eto amin’ny firenena sy fanovana ny fiainam-bahoaka. “Mampanantena anareo aho fa anatin’ny fotoana fohy na ny marimarina kokoa, anatin’ny 100 andro dia hisy fiovana goavana eto Madagasikara. Isika tsy mba manao kobaka am-bava toa ny an’ny sasany, fa izay voalazantsika dia hotanteraka avokoa…”, hoy i Marc Ravalomanana.
Tsy vitan’izay fa amin’ny maha fampielezan-kevitra azy, nandresy lahatra ireo mponina ny kandidà laharana faha-25, tamin’ny alalan’ny programan’asany sy fandaharan’asany, ilay antsoina hoe “Manifesto”. “Lazaiko aminareo fa ao anatin’ny “Manifesto” avokoa ny fandaharan’asantsika. Tazana ao avokoa ny fampandrosoana rehetra sy ny lafin’ny sosialim-bahoaka. Anisan’izany ny paikady amin’ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana, ny fahasalamana, ny fampianarana, ny famoronan’asa, ny fananganana fotodrafitrasa manaraka ny fenitra sy ny teknôlôjia, ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapariaham-pahefana tena izy, sns”, hoy hatrany izy.
Notsindriany mafy ihany koa fa tsy maintsy atao izay hamerenana ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny mpitondra eto amin’ny firenena mba hisian’ny fitoniana, ary indrindra, hoy izy, ny fampakarana ny toekarem-pirenena, izay tsy azo ihodivirana, satria andry iankinan’ny fampandrosoana izany.
“Mpanangana isika fa tsy mpandrava. Noho izany, ataontsika izay hanalana an’i Madagasikara ao anatin’izao haizina mangitsokitsoka izao. Marihiko aminareo eto fa nitontongana hatrany amin’ny 100% ny sandam-bola malagasy, ka tsy maintsy mitady hevitra isika hamerenana ny lanjan’ny Ariary, ary efa eto am-pelatanantsika ny drafitra maty paika amin’izany…”, hoy hatrany ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana.
Tsy nohadinoin’ity kandidà mpifaninana amin’ny fihodinana faharoan’ny fifidianana Filoham-pirenena ity ihany koa, ny nanentana ny vahoaka hanatanteraka ny adidy masina amin’ny fanehoan-tsafidy amin’ny alalan’ny latsa-bato. Nanoro ny fomba rehetra atao amin’izay latsa-bato izany ihany koa ny tenany. “Amin’ny alalan’ny fifidianana ihany no ahafaha-maneho ny fandresena demokratika”, hoy izy tamin’izany.
Efa tsy mipetraka amin’ny maha Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly azy intsony ny Bianco ankehitriny. Fanaovana antsojay, herisetra, fampihorohoroana, fironana politika, fanaovana politika, sns. Ireo rehetra ireo dia azo hamaritana ny fomba fiasan’ny Bianco ...Tohiny
Filoha Rajaonarimampianina Hery : « Tsy afa-misaraka ny maha-Filoha sy ny maha-kristianina ahy »